အချပ်ပိုသတင်းထူးကတော့... မနေ့ညတစ်နာရီလောက်က.မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်မှာ.'အုံး'ခနဲ 'မြည်' ပါသတဲ့ရှင်။
ဆင်အော်ရင်တောင်နိုးမယ်မထင်တဲ့.သမီးစံတော့..မသိလိုက်ပါဘူး။ (အိမ်ကအစ်မကတော့ပြောတယ်.နင်သာမနိုးတာ.ငါတော့ပြန်အိပ်လို့တောင်မရတော့ဘူးတဲ့..) ကိုယ်နေတဲ့..နေရာထိအောင်..သိရတယ်ဆိုတော့..အခြေနေတော်တော်ဆိုးတယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ တလောတုန်းကလည်း..မြို့တော်ခန်းမနားမှာ"အုံး..အုံး" မြည်ပါသေးတယ်။ (ပထမတော့..ကားဘီးပေါက်တယ်ထင်တာ..) စင်ကာပူနဲ့.တူအောင်.ထားပါမယ်ဆိုတဲ့မြို့မှာမှ..လာ'မြည်'နေရတယ်လို့တော်.. ခုဆိုဘယ်သွားသွား..(လူက) ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ကြည့်နေတတ်ပြီ လူထူတဲ့နေရာဆို..မသိမသာရှောင်တယ်။ လမ်းသွားရင်း..တစ်နေရာရာက..တီ.တီ.တီမြည်ရင်.အသားကုန်ပြေးတော့တာပဲး))
ဟိုကြောင်း.ဒီကြောင်းတွေ.ဘာမှ.ဂဃနန.မသိပေမယ့် ဒီလိုအသံတွေတော့..ဆက်တိုက်မကြားချင်တာ.အမှန်ပါ။ “လူသားအားလုံး..နှစ်သစ်မှာ..ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေ”…
ဒါကြောင့် မို့..အသစ်ထပ်ပြန်ရေးရင် ကြာနေမှာစိုးတာကြောင့်..မေးခွန်းတွေပဲ..ဖြေပေးပါရစေရှင်။ တစ်ခါတစ်လေ..ခဲလေသမျှ..သဲရည်ကျတဲ့အခါ...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်..
အဲလိုသာ..ဆုံးမလိုက်ချင်ပါတော့တယ်..(အရိုက်ခံတဲ့နေရာကို..ပြောတာပါနော်) ပြန်ရေးထားတာဖြစ်ပေမယ့်..အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်...ရေးပေးထားပါတယ်။ သတိတရတဂ်ပေးတဲ့အတွက်လည်း..အစ်မနဲ့.ညီမလေးကို...ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့..ရေအ၀တိုက်ချင်ပါ သေးတယ်။း)(စိတ်ပိန်နေပေမယ့်လည်း..ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲပေါ့နော်) ဟုတ်ကဲ့...တဂ်ပို့စ်ထဲက မေးခွန်းလေးတွေ..စဖြေပါ့မယ်နော်။
♥ ခရစ်စမတ် ရောက်ခါနီးရင် စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်မိပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့..အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့..ထွေထွေထူးထူး..မခံစားရပါဘူး။အဲ...ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။..(ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ.မေးမထားတော့.မပြောတော့ပါဘူးနော်း)
♥ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ကို ခရစ်စမတ် သစ်ပင်၊ decoration ornaments များနဲ့ အလှဆင်လေ့ ရှိပါသလား။ မရှိပါဘူးရှင်။
ခေါက်ကြမယ်ဆိုလို့..လန့်မသွားပါနဲ့အုံးနော်..။စက္ကူခေါက်မှာကို.ပြောတာပါရှန့်:P (ကောင်မလေးတွေအတွက်)စာပေးစာယူ.မေဂျာယူထားတဲ့သူတွေနဲ့ဆို.အင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်း) စာအိပ်လေးမြင်တာနဲ့..ဖတ်ချင်လာအောင်.ဆွဲဆောင်တဲ့နည်းလေးဆိုပါတော့.. ကဲ...စလိုက်ကြစို့နော်..ရောင်းရင်းတို့း))
ပထမဆုံး.ကိုယ်ခေါက်မယ့်.စက္ကူအရောင်ကိုရွေးပါ။ (ရိုးရိုးစာရွက်ဆိုလည်းရပါတယ်။.ရောင်စုံလေးသုံးတော့.ပိုလှမလားလို့ပါး) ပြီးရင်.အလယ်ကနေ..(နည်းနည်းညီညီလေး)ခေါက်လိုက်ပါ။